Ukuxhobisa Umsebenzi wakho ngeCISCO Premier Infrastructure Training ... IYO
Ukucinga ngomnye umsebenzi, ukuphuculwa kwesi sikhundla sakho samanje okanye ukuphucula ukufunda okwenene kuluhlu, Uqeqesho lwe-CISCO lweZiseko zoQeqesho unokukunika ukuphakamisa okulungileyo. Kuthe malunga nexesha oya kuqonda ukuba iNethwekhi ibumba ukujika kwehlabathi le-IT elinamandla. Eyona nto iboniswe bhetele, ilungelelaniswe kwaye ilungelelanise inkqubo, ngaphezulu kokungena kuvula ukuqhubela phambili kwindawo. Ngaphandle kokungathandabuzeki oku kufuna iimfuno ezifanelekileyo zokufunda nokukwazi ukwenza izinto kwaye kubonwa kwaye kubaluleke kakhulu okanye kunoko kubaluleke kakhulu, ufuna ukuba ulwazi olusisiseko luyakhelwe ukuba lubuyele emva kokukhanya; udinga Uqeqesho lwe-CISCO Premier Infrastructure Training kunye nesitifiketi.
Uqeqesho lwe-CISCO lweZiseko zoQeqesho kufuneka kube lula ngokukhetha nanini na kwiiseshoni zeklasini okanye kwinduduzo yendlu yakho. Apha uqiniswa yizithethi zeenkosi. Ezi zithethi ezigqithiseleyo zinokukwazi ukulawula ngekhosi yakho ngokunika inkxaso efanelekileyo kunye nokuhlolwa kwangaphambili. Ukususela ekukhokelweni nasekuqeqesheni kubunzima bokuzikhangela kwiimeko ezininzi ezifunekayo nezifanelekileyo, uya kuhlangana ne-adventure ekhokelwayo eya kukubandakanya ukuba ubhekane nayo kwaye uyangeniswa ngokukrakra kwehlabathi.
Yiyiphi inzuzo eyongeziweyo?
Aba baqeqeshi abaqeqeshi bangakwazi ukuphazamisa ingcamango yabo kwaye baxubushe kwiimeko eziyinyani.
Ezi ngcali ziphumelele ngokukhawuleza ukuba ziqonde ukuqonda yakho imfuno kwaye zikunikeze ngeemfuneko.
Ngengqungquthela engaqondakaliyo yolwazi ukunyathela kwisithuba esifutshane sexesha, abacebisi abanikiweyo banokukunceda ukugubungela izinto eziphathekayo ngaphakathi nangaphandle kwaye ubeke ukulungiselela ukuhlolwa kakuhle phakathi kwexesha.
Ngokubanzi, abaqeqeshiweyo abaqeqeshiweyo, abaqeqeshiweyo, abaqeqeshi benza ukuba oku kube ngukubandakanyeka ngaphakathi nangaphandle; ekuncediseni ukwandisa ulwazi olukhethekileyo kunye nokwenza ukuba ubonise ukulungiswa.